Spotify oo la dacweeyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xafiiska weyn ee Spotify ee ku yaalla Birger Jarlsgatan Stockholm sawir: Fredrik Sandberg / TT
Spotify oo la dacweeyay
La daabacay onsdag 3 januari 2018 kl 14.50
Shirkada heesaha laga dhageysto ee Spotify ayaa waxaa lagu furay dacwad lagu dalbanayo magdhaw gaaraya 13 bilyan oo karoon iyada oo lagu eedeeynayo in ay ciyaarsiisay heeso aysan ruqsad u heysan in ay baahiso.
Heesha la sheegayo in ay ruqsad la'aan baahisay Spotify ayaa waxaa ka mid ah heeso ay qaadeen fanaaniinta kala ah The Doors iyo Tom Petty .
Sida laga soo xiganayo warar xagga warbaahinta ah, Spotify oo ah shirkad Sweden laga leeyahay ayaa qorsheeneysa sanadkan in ay ku soo biirto seylada maalgashiga shirkadaha hase yeeshee waxaa aad muhiim u ah shirkadaha sida Spotify oo kale in ay dhowraan aaminaada loo hayo, sida uu leeyahay, Christopher Lyrhem, oo qabiir xagga istaraatijiyada saamiga oo ka tirsan bankiga SEB.
Soptify ayaa waxaa dacwada ku soo oogtay shirkada miyuusikada Wixen Music Publishing waxayna Wixen ku andacooneysaa in Spotify aysan heysan ruqsad ay kuu baahiso ku dhowaad 11 000 heso, sida ay ku warameyso wakaaladda wararka ee Reuters.
Dacwadan ayaa ku soo beegmeysa xilli shirkada Spotify ay isu diyaarineyso in ay gasho seylada maalgashiga shirkadaha ee New York.
Spotify ayaa diiday in ay ka hadasho dacwada laga gudbiyay balse hadal qoraal ah oo ay u dirtay maxkamada dacwada laga geeyay, ayay shirkada Spotify waxay su'aal ka keentay haddii shirkada dacwada ka gudbisay ee Wixen ay qudheeda oggolaasho in ay matali karto ka heysato fanaaniinta heesahooda la baahiyay.
Ma ahan markii ugu horreysay ee shirkada Spotify lagu dacweeyo in ay ku xadgudubtay xaquuqda asalka.
Gu'gii hore, ayay shirkada ku xalisay heshiis dacwad lagu soo oogay waxayna sanduuq magdhaw ah ku shubtay lacag gaareysa 377 milyan taasi oo magdhaw ahaan u qaateen dad heeso ay qoreen ay shirkada baahisay ruqsad la'aantooda.